Ipiyano Ye-Hybrid Egudileyo
Ipiyano Ye-Hybrid Egudileyo I-EXXEO yindawo entle yeHybrid piano yezikhala zanamhlanje. Luhlobo olwahlukileyo lobume bezinto ezintathu ezihlanganisiweyo zamaza esandi. Abathengi banokwenza ngokwezifiso ipiyano yabo ukuba ivumelane neemeko eziyingqongileyo njengesihombiso sobugcisa. Le piyano yexabiso eliphakamileyo yenziwe ngaphandle kwezixhobo zangaphandle ezifana neCarbon Fibre, Isikhumba sePrimiyine yeLight kunye neAerospace grade Aluminium.Advanced radioboard speaker; ubuyisa uluhlu olubanzi lwamandla e-Grand pianos ngokusebenzisa ii-Watts ezingama-200, inkqubo yesandi esisi-9. Ibhetri eyakhelwe ngaphakathi eyenzelwe ukugcina ipiyano ukwenza ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20 kwityala elinye.
I-Chandelier Obugcisa - into yobugcisa enemibane. Igumbi elibanzi kunye nophahla lweprofayili eyinkimbinkimbi, njengamafu e-cumulus. I-Chandelier ifanela kwisithuba, ngokutyibilikayo ukusuka eludongeni olungaphambili ukuya kwisilingi. Amagqabantshintshi ekhristal kunye nemhlophe emhlophe ngokudibeneyo kunye nokugoba okuqobayo kweetyhubhu ezinqabileyo zenza umfanekiso wesigqubuthelo esiphaphazelayo emhlabeni. Ubuninzi bokukhanya kunye negolide ekhazimlayo yeentaka ezindizayo zenza imvakalelo yobubanzi kunye noyolo.
Isincamathelisi Somgaqo We-Qr
Isincamathelisi Somgaqo We-Qr Indlela entsha yokuthengisa imoto yakho naphina! Kuphela ku: !! Umthengi, jonga nje ikhowudi ye-QR oyibona kwindawo yokupaka iimoto kwiivenkile zamasebe, iivenkile zekofu, izakhiwo, njl njl. Ukufikelela kwiinkcukacha zemoto kwangoko. Fowunela uMthengisi kwaye ujonge. Zonke zenzekile ngequbuliso kwindawo enikuyo nina nobabini !!!
Only Right Here Ubambe Isitshixo Saturday 4 December
180º North East Inoveli Friday 3 December
Ballo Isithethi Esiphathwayo Thursday 2 December
Ipiyano Ye-Hybrid Egudileyo Iindwendwe I-Chandelier Inkqubo Yemisitho Yoyilo Isincamathelisi Somgaqo We-Qr Isixhobo Semfundo Noqeqesho